(Madda Oduu ABO/MOA Bitootessa 13,2009) Bitootessa 8,bara 2009 Wallaga Horroo Guduruu ona Limmuu Galiilaa Ganda Qonnaan Bulaa saphiira meexxii jedhamu keessatti ummatni Oromoo gaaffii mirgaa fi abbaa biyyummaa kaasaa turan baroota dheeraaf mootummaa Wayyaanee irraa deebiin kennamaa ture,hidhaa,rrebicha ajjeechaa fi qabeenyaa samamanii biyyaa ariyatamuu waan taheef jibba roorroo kana irraa kan kaa’e ummanni jiraataa ona kanaa FDG godhachuun ergamtoota Wayyaanee onicha bulchanii 15 irratti tarkaanfii laalessaa fudhachuun kaan reebanii kaan ona naannoo irraa ariyanii jiraachuun beekame.
Kana irratti dabalee gaafatamaa Ona sanii kan tahe qondaala OPDO yeroo dheeraaf ummata naannoo rakkisaa kan ture nama Amsaaluu Tafarraa jedhamu guyyaa kana guutummaatti mana isaa fi qabeenya isaa ummatni fincila kaase barbaadeessan jiru. Namoonni hafaniis reebichi hamaan irraa gahee jirchuu MOA naannoo san irraa gabaasa.
Kanneen reebamanii fi qabeenyi isaanii barbaadaaye kun ummata naannoon gibiraa fi buusii OPDOf buusa,miseensa tahaa jedhanii gidiraa guddaa irraan gahaa warra ture tahuun beekama.
Gabaasa guutuu kanaa gara fuula duratti qindaayee dhihaata.Tarkaanffiin Laalessaan
Godina Harargee bahaa keessatti lukkeewwan wayyaanee fi hojjettootni walitti bu’an.
(Madda Oduu ABO/MOA Bitootessa 13,2009)MOA godina Harargee irraa akka gabaasetti, Godina Harargee bahaa keessatti ergamtoota wayyaanee OPDOf maallaqa gaafatanii fi hojjettoota gidduutti wal dhabbiin uumamee jira.
Sababiin walitti bu’iinsa kanaa lukkeeleen wayyaanee OPDOn hojjettootaan miindaa keessan irraa harka 100 keessaa 50 (50%) dhaaba keenyaaf kennaa jedhanii waan dirqaniif ta’uutu gabaafame.
Hojjettootni mormii dhageessisaniin, miindaan mootummaan nuu kennaa jiru iyyuu haala jiruu fi jireenya biyyattii keessaa yeroo ammaa waliinuu waan wal hin madaalleef, maallaqa OPDOf kenninu tokko iyyuu hin qabnu jechuun akka didantu ibsame.
OPDOn humnaan maallaqa nu irraa funaanuuf yaalii gootu hin dhaabdu taanaan, hojii keenya gadhiisuuf dirqamna jechuun hojjettootni Godina Harargee bahaa akeekkachiisaniiru.
Haala miindaan nuuf kaffalamuu fi qaalominni jireenyaa jiru wal hin madaalle keessatti miindaa keessan irraa nuu muraa jechuun OPDO diinummaa nuuf qabdu daran kan mul’isuu dha jechuun hojjettootni Oromoo Godina Harargee bahaa sagalee isaanii dhageessisan.
Wayta ammaa mootummaan wayyaanee karaa lukkee isaan ummata Oromoo maallaqa saamaa, miseensa keenyas ta’aa jechaa gidirsaa jiraachuun beekamaa dha.
(Madda Oduu ABO/MOA Bitootessa 13,2009) Sochii barattoota Oromoo Godina Shawaa Lixaa magaalaa Geedootti dhalateen wal qabatee mootummaan faashistii wayyaanee sodaan liqimfamuun humna waraana isaan magaalattii fi naannoo sana marsee jiruu fi jireenya lammiilee balaa irra buusee akka jiru maddeen keenya saaxilaniiru.
(Madda Oduu ABO/MOA Bitootessa 13,2009) Odeessi baha Oromiyaa irraa nu gahe akka hubachiisutti, basaasonni Wayyaanee dharaan namoota nagaa yakkanii hidhatti guursisuu fi sabboontota Oromoo irratti shira xaxuuf bobbaafaman.